Adobe Social uye iyo Adobe Kushambadzira Cloud | Martech Zone
China, December 13, 2012 China, December 13, 2012 Douglas Karr
Adobe paakaita iyo Omniture kutenga, ini ndainetseka kuti ivo vanongo regedza pane iyo analytics kumberi uye zvigadzirwa zvaizorasika pakati pezvishandiso zvavo zvekutsikisa. Sezvo isu tichishanda pamwe nevazhinji vatengi uye tichiona Adobe Dhijitari Kushambadzira Suite ichinyatso kusangana, ndiri kutanga kuchinja mond yangu. Kwayedza & Target ipuratifomu hombe uye kusabatana kwakabatana uye kushandiswa kwakawanda kune Analytics kunoita kuti ive inofanirwa.
Inotevera kumusoro ndeye Adobe Zvemagariro. Kana iwe uri mushandisi weAdobe Analytics, Adobe Social yakanaka kwazvo yekumanikidza kuitiswa.
Adobe Social chigadzirwa chimwe chete chekugadzirisa zviitiko zvekushambadzira zvemagariro zvinopera - kubva pakutenga kushambadzira, kushambadza kune vateveri nevateveri, kutyaira kubatikana uye kuyera mhedzisiro yebhizinesi. Iyo haimiriri chete mhinduro imwe chete yebhizimusi repakati rekushambadzira zviitiko, asi chigadzirwa chine mukana wekubatanidzwa neiyo Adobe Kushambadzira Cloud kuunza mizhinji-chiteshi kuyerwa uye kugadzirisa kune iyo musanganiswa. Kubva ku Adobe blog.
Adobe inonyora akawanda mabhenefiti eAdobe Social:
Ratidzira pasocial media ROI - Fambisa kupfuura zvinofarirwa uye zvikamu kuburikidza nekubatanidza zviitiko zvehukama kune metric yebhizinesi uye kuona kuti ndedzipi kudyidzana munharaunda kunokanganisa maitiro ekutenga uye kukosha kwechiratidzo
Gonesa kushambadzira kwako neyekupedzisira-kumagumo maonero emutengi - Shandisa nzwisiso yenzanga kuti unzwisise zvirinani zviitiko zvevatengi nemaitiro. Sarudza zviitiko zvekushambadzira kuti usvike kumunhu chaiye
Kuvandudza kushanda kwemagariro manejimendi manejimendi - Regedza bhizinesi-chikamu chikamu chekufambisa masisitimu ekubata vateereri pasi rese uye kupindura kune vatengi kutaurirana munharaunda panguva yekuyera kutonga uye kugadzirisa hutongi pasangano rose.
Tags: adobe digital kushambadzira suiteadobe munharaundamagariro enhau analytics
Yemagariro Ebhizimusi Maitiro Akanyanya